Sherwood Hideaway - I-Airbnb
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguSue
Ngaba ufuna ikhefu? Singanikezela ngendawo yokuhlala epholileyo, etofotofo kwindawo enoxolo yasemaphandleni kwiNtlambo entle yaseKiewa nangona iAlbury/Wodonga ikumgama nje wemizuzu engama-30!
Iidolophu ezinembali kunye neelali ezinje ngeBright, Yackandandah, Beechworth, Chiltern, Milawa, Tangambalanga Tallangatta kunye neCorryong zonke zifumaneka ngokulula. Iindlela zikaloliwe zokuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile zikufuphi njengoMlambo iKiewa kunye neHume Weir yokuloba kunye nabathanda ukukhwela isikhephe.
“Ibhari”, enestudiyo sayo esiphezulu sibekwe ecaleni kwendlu yethu.
Indawo yokungena isezantsi kwaye indawo yokuhlala iphezulu ene-balcony.
Indawo yokuhlala yindawo enye enkulu kwaye ibandakanya indawo yokulala, yokuphumla kunye nokutya.
Kukho ibhedi ephindwe kabini, ibhedi enye kunye nebhedi encinci esongwayo elungele abantwana abancinci okanye abancinci.
Indawo yokuhlala okanye yokuphumla kulapho uya kufumana iTV, unomathotholo kunye neshelufa yeencwadi kunye nesofa.
Ukutya kukho ikhitshi elinezixhobo zokupheka ezisisiseko-imicrowave, iketile, itoaster kunye nepani enkulu yombane-kunye netafile yokutyela. Kukho ne-BBQ yombane kwibalcony.
Igumbi lokuhlambela, elineshawa, indlu yangasese kunye nesitya, lisezantsi ukuya ngasekhohlo kwendawo yokungena.
Yonke indawo yeyakho ukuba uyonwabele ngelixa ulapha kwaye iyatshixwa ukuba ukude usuku.
Yindawo ehlala intle ezolileyo equlathe iibhloko ezincinci zasemaphandleni kodwa ijikelezwe ziifama kunye neefama. Abamelwane banobuhlobo kakhulu ngemidla yasemaphandleni kwaye usenokudibana nabanye babo ukuba uphume kuhambo lwakusasa.
Siza kuhlangana kwaye sikubulise ekufikeni kwakho kwaye sifumaneke ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo. Ukuba asikwazi ukubakho ukuze sidibane nawe sinokwenza amalungiselelo ngenkonzo yokuthumela imiyalezo ye-AirBnb.
Siye sayivuyela kakhulu into yokuba iindwendwe zifike endlini zize kusibona njengoko bezihamba.
Siza kuhlangana kwaye sikubulise ekufikeni kwakho kwaye sifumaneke ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo. Ukuba asikwazi ukubakho ukuze sidibane nawe sinokwenza amalungiselelo ngenko…